Fanoherana ny fitifiran’ny polisy :: Ambivitra ny fanafihan’ny andian’olona ny biraon’ny Kaomisaria • AoRaha
Fanoherana ny fitifiran’ny polisy Ambivitra ny fanafihan’ny andian’olona ny biraon’ny Kaomisaria
Voafehy ihany ny raharaha niteraka savorovoro tany Ambohimahasoa, hatramin’ny afak’omaly. Niditra an-tsehatra ireo manampahefana sy olom-boafidy tany an-toerana tamin’ny fandresena lahatra an’ireo andian’olona nikasa hanao fitsaram-bahoaka tao amin’ny biraon’ny kaomisaria tany an-toerana. Nandray andraikitra nandefa kaomisera sy polisy efatra avy aty an-drenivohitra hanao famotorana any an-toerana avy hatrany ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka. “Tsy maintsy hatolotra ny Fitsarana ny vokatry ny famotorana rehetra”, hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny Polisim-pirenena.
Tonga tany amin’ny tanàna iray antsoina hoe Voatavo, kaominina Tsarafidy ireo polisy vitsivitsy notarihin’ny kaomisera lehiben’ny kaomisaria any an-toerana, tamin’ny 6 aogositra lasa teo tokony tamin’ny 3 ora. Nitondra didim-pitsarana hisambotra olona roa antsoina hoe Ratalata Marcel, 49 taona, sy Fahatelo, 20 taona, rahalahin’ny Ben’ny tanànan’ny kaominina Tsarafidy ireo mpitandro filaminana. Voatonontonona ho lehiben’ny dahalo ireo olona roa ireo. Nahita omby miisa folo tsy ara-dalàna koa ireo polisy, ka noentin’izy ireo natoka-monina any Ambohimahasoa”, hoy ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
Voalaza fa nikasa hitsoaka anefa ireo olona roa nosamborina ireo, teny an-dalana hihazo an’Ambohimahasoa, ka maty notifirin’ireo polisy. Tohina noho io zava-nisy io ny sasany tamin’ny fianakavian’izy ireo, ka niantso olona hanao fitsaram-bahoaka ny biraon’ny kaomisarian’ny polisy. Nisy ny fanentanana ny olona tsy hanaraka izany tamin’ny fahitalavi-pirenena tao an-toerana.
Nihaona tamin’ireo manampahefana sy olom-boafidy ny Ben’ny tanànan’i Tsarafidy, izay havan’izy roa lahy namoy ny ainy, omaly. “Nanome vola iray tapitrisa ariary ny kaomiseran’ ny polisy io Ben’ny tanàna io teo imason’ireo manampahefana mba handaminana ny raharaha. Nogiazan’ny kaomisera ilay vola ary nampanateriny any amin’ny Lehiben’ny distrika”, hoy ny fampitam-baovao avy amin’ny Polisim-pirenena. Ahiana ho kolikoly izany fihetsik’ilay Ben’ny tanàna izany, ka misy ny famotorana atao aminy ihany koa, araka ny loharanom-baovao hatrany.
Loza teny Ampitatafika :: Noafahana ilay mpamily nahafaty tovolahy telo
Fifamaliana nitera-doza :: Lehilahy maty voatsindron’antsy teo amin’ny fony